မောင်အောင် ကြည့်ဖို့ :-) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Celebrity » မောင်အောင် ကြည့်ဖို့ :-)	7
မောင်အောင် ကြည့်ဖို့ :-)
Posted by မြစပဲရိုး on Dec 23, 2015 in Celebrity |7comments
သေချာအောင် ပြက္ခဒိန် ဘဲ ဆွဲလာတော့တယ်။
နှစ်သက် သူ အမည် ကို ကြိုးစားရှာပေတော့။
Miss Universe Myanmar နစ်ယောက်လုံး က အနီ နဲ့။
မယုံဘူးလား။ jk :-))))
ပုံ အကြီး ကို ကြည်လင်စွာ ကြည့်လိုပါက ပုံပေါ်မှာ နှစ်ခါ ကလစ် လုပ်ပြီး ကြည့်ကြပါရန်။
E-မြောက်မြောက် says: ဟယ် ဖိုးကာ သီချင်းလေး ဆိုခဲ့မယ်
တနေဂုံ ထိုင်ပြီး ဒဇိမ့်ဇိမ့်ကျိ
မောင်အောင်က သူမအားသေးလို့ အစားဝင်ကျိထားပေးဘာဆိုလို့
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ် အရီးရေ အဲ့တုန်းက သွားရိုက်တုန်းက မေ မပါဘူးမှတ်လို့။ ဟိဟိ။ ကျတော်မှားသွားတာ။
alinsett says: ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်….
သူတို့လေးတွေနဲ့…. အတူ ပူးပူးကပ်ကပ်…တွဲရိုက်ချင်လာတယ်…တို့…
ဘာတို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဒညင်းဝက်က တစ်မျိုး
kai says: ဒီဇင်ဘာ၁၆ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အကြိုပွဲမှာ ၁) တဦးချင်းနိုင်ငံအလိုက်မိတ်ဆက်ပွဲ
(OPENING ROUND COMPETITION) ၂)ရေကူးဝတ်စုံအလှပြိုင်ပွဲ(SWIM WEAR COMPETITION) ၃)ညနေပိုင်းဝတ်စုံအလှပြိုင်ပွဲ(EVENING GOWN COMPETITION) ၄) တိုင်းပြည်ကိုယ်စားပြု
ရိုးရာဝတ်စုံပြိုင်ပွဲ(NATIONAL COSTUME) ရယ်လို့၎ပွဲယှဉ်ပြိုင်ကြရပါတယ်။ ဒုတိယရေကူးဝတ်စုံပြိုင်ပွဲမှာ MISS MYANMAR ရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံက ကိုယ်ခန္ဓာ
ရလားလို့စပ်စုမိတော့ ” မဟုတ်ပါဘူး။. သမီးရောက်တော့ သူများရွေးပြီးကျန်တာကို ပဲယူလိုက်ရတော့ သမီးရဲ့ Size မရ လိုက်ဘူး။ ကြီးတဲ့ဆိုက်ပဲရလိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တုန်းက ၀တ်စုံလဲ ရွေးလို့မရဘူး။ သူတို့သတ်မှတ်ပေးတာဆိုတော့ No Choice ဖြစ် သွားရတာပါ” တဲ့။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘယ်သူဒေ မှန်းတော့ မသိ..
Ma Ei says: ရုံးမှာ လက်ဆောင်လာပေးလို့ ယူထားတယ်